Mesut Ozil oo ku soo laabtay tababarka kooxda Arsenal – Gool FM
Mesut Ozil oo ku soo laabtay tababarka kooxda Arsenal
Haaruun January 5, 2017
(London) 05 Janaayo 2017 – Mesut Ozil ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxdiisa Arsenal, kaddib markii uu ka soo kabsaday Hergab ku dhacay kaasoo uu la maqnaa tan iyo Boxing Day.
28-sano jirkaan ayaa seegay labadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay kooxdiisa Arsenal ciyaartay Premier League, laakiin waxaa la filayaa inuu dib ugu soo laabto safka Gunners kulanka ay la ciyaari doonaan Sabtida soo aaddan kooxda Swansea.
Xiddiga reer Germany ayaa maanta oo Khamiis ah yimid xarunta tababarka Arsenal ee London Colney, waxaana la qiimayn doonaa xaaladdiisa, iyadoo ay u badan tahay inuu seegi doono kulanka wareegga saddexaad ee FA Cup oo ay Gunners wajahayso Sabtida, laakiin waxay u muuqataa inuu soo laaban doono kulanka ay u safrayaan kooxda Swansea usbuuc kaddib kulankaas.
“Waxaan ku soo laabtay xarunta tababarka Arsenal kaddib hergabkii igu dhacay, wali ma’ahi 100%, laakiin waan soo laabtay.” ayuu Ozil ku soo qoray bartiisa Twitter-ka.
Returning to @Arsenal training ground after my flu. Not yet at 💯% but I’m back👍😉 #COYG pic.twitter.com/ZCpyUzfPsy
— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 5, 2017
Ozil ayaa hadda wadahadallo heshiis kordhin waqti dheer kula jira kooxdiisa Arsenal.
RASMI: Kooxda Everton oo xaqiijisay saxiixa Ademola Lookman… + SAWIRRO
UEFA oo shaacisay shaxda kooxda sanadka ee 2016